13zọ XNUMX iji zube ozi na mgbasa ozi ngosi | Martech Zone
Fraịde, Septemba 18, 2015 Saturday, January 14, 2017 Douglas Karr
Ngosiputa mgbasa ozi na-aga n'ihu na ọkaibe ya dị ka anyị kwurula na mbụ n'ajụjụ ọnụ anyị gbasara Programmatic Mgbasa ozi na Pete Kluge nke Adobe. Ọ bụrụ na ị na-eche gbasara ịgbasa mgbasa ozi gị na mgbasa ozi ngosi, enwere ụzọ ole na ole iji lelee echiche mgbasa ozi gị iji gbalịa ijide ndị na-ege ntị dị mkpa, ọnụọgụ pịa dị elu, na mgbanwe ndị ka mma:
Ebumnuche ika - site na nyochaa ọdịnaya dị na ibe ahụ na ịmata ụdị ma ọ bụ aha ngwaahịa, ị nwere ike ibido mgbasa ozi dabere na ndị ọbịa na-achọ ngwaahịa gị ma ọ bụ ngwaahịa ndị asọmpi gị.
Channel Icheta - ngosi mgbasa ozi mgbasa ozi na-enye ọwa mmiri nwere nghọta maka itinye aka na saịtị nwere ọdịmma dị iche iche. Akụkọ, egwuregwu, nri, ntụrụndụ, wdg.
Ngwaọrụ ezubere iche - mgbasa ozi nwere ike ịdabere na mkpanaka, mbadamba na ụdị ngosi dị iche iche.
Omuma ndi mmadu - afọ, okike, agbụrụ, akụnụba, aha, na ozi igwe mmadụ ndị ọzọ.
Ebumnuche Geographic - mba, steeti, ógbè, obodo, agbata obi, koodu nzi ozi, ohere na lonjituudu na mpaghara ma ọ bụ okirikiri.
Izu Izu Okwu - gosipụta netwọk mgbasa ozi na-akawanye mma na nyochaa ọdịnaya dị na ibe ahụ ma gosipụta mgbasa ozi dị mkpa dabere na isiokwu ndị onye mgbasa ozi ahọpụtara.
Icheta Mmasị - dabere na omume nchọgharị nke ndị ọbịa, akụkọ nzụta na mkpa nke saịtị ahụ, enwere ike ịdabere na mgbasa ozi site na mmasị dị ka egwuregwu, isi nri, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, wdg.
Ebumnuche Na-Ahịa - ezigbo ngosipụta mgbasa ozi na ntinye ma ọ bụ ngwaahịa ndị metụtara ya mgbe onye ọbịa nọ na saịtị gị na-eme nchọpụta ma ọ bụ na-azụ ahịa.
Weghachite - mgbe onye ọbịa bịara na saịtị gị wee pụọ, netwọ mgbasa ozi nwere kuki ndị ọzọ na-enye ha ohere ịhụ ha na saịtị ndị ọzọ ebe a ga-enye ha onyinye ịlaghachi.
Chọọ Ntughari - mgbe onye ọbịa na-achọ, bịarute na saịtị gị wee pụọ, netwọọdụ mgbasa ozi ọchụchọ nwere kuki ndị ọzọ na-enye ha ohere ịhụ ha na nyocha ndị ọzọ ebe a ga-enye ha onyinye iji laghachi.
Icheta saịtị - enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa na-achọ ịbịaru ndị na-ege anyị ntị, yabụ anyị nwere netwọkụ ngosi anyị na ọnụ ụzọ ọrụ onwe onye ebe ndi mgbasa ozi nwere ike izu ihe ad ozugbo.
Ebumnuche Maka Oge - Oge nke ụbọchị, ụbọchị, ma ọ bụ ihe omume oge mgbe onye ọbịa bịara na saịtị gị.
Ebumnuche nke Social - ewu ewu, mmetụta, mkpa na ihe ndị a.
Usoro ohuru na-ebu amụma banyere ọghọm nke onye ọbịa ịpị site na nyocha nke oge nke onye ọbịa ahụ bịara ma gosipụta mgbasa ozi kwesịrị ekwesị. Buru n'uche na, ọbụlagodi na ajụjụ ndị gbara ọkpụrụkpụ, ndị na-ere ahịa nwere ike iwulite ọnọdụ dị iche iche ezubere iche dabere na njikọta nke ike ngosi mgbasa ozi dị iche iche. Ọ bụghị ụdị netwọkụ mgbasa ozi niile na-enye ụdị ọ bụla, yabụ kpachara anya ịtụle netwọọdụ mgbasa ozi.
Lelee site na Mgbasa ozi.
Tags: netwọk mgbasamgbasa ozi ezubere ichengosi ad netwọkezubere iche maka mgbasa ozi
Ọkt 13, 2015 na 10:02 AM
Anyị na-abanye ugbu a na mgbasa ozi ngosi mana anyị amalitela ịmepụta ọtụtụ ndepụta ndepụta. Mgbasa ozi ikpeazụ anyị gara nke ọma.
Ọkt 19, 2015 na 9:17 AM
Iweghachite bụ otu n’ime usoro mgbasa ozi ngosi m kachasị amasị m. Eziokwu ahụ na ha amaraworị banyere akara gị bụ nnukwu uru maka gị na dollar mgbasa ozi gị.
Ọkt 19, 2015 na 12:34 PM
Anụla m nke ahụ site n'ọtụtụ ndị ahịa, Steven!